BurnAware Professional 4.8 With Crack Full Version...! | အိမ်လွမ်းသူ...
BurnAware Professional 4.8 With Crack Full Version...!
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ BurnAware Professional 4.8 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!32 Bit & 64 Bit နှစ်ခုလုံးမှာ သုံးလို့ရပါတယ်...!သုံးရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်...!Software ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ...!Full Version လေးရချင်ရင်တော့ Install Note ကိုသေချာဖတ်ပြီးမှ Install လုပ်ပေးပါ...!
1. Copy3files from folder crack and paste to folder setup BurnAware
2. Run file ren.bat and reg.reg
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.89 MB ရှိပါတယ်...!ကျွန်တော် အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
2 Response to BurnAware Professional 4.8 With Crack Full Version...!
အကိုတော့ တင်သမျှ ဆော့ဝဲလေးတွေ၊ နည်းပညာလေးတွေ
လာရောက်လေ့လာပါတယ်... ကိုယ်နဲ့ အသုံးတဲ့ တာလေးတွေ
ကို ကူးယူသွားပါတယ် ...အခုလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အများသူငြာ
အကျိုးရှိစေမယ့် ကိုယ်တတ်ထား၊ သိထားတဲ့ နည်းပညာလေးတွေ
ကို မျှဝေပေးနေတာလည်း ပရဟိတ္တ လုပ်ငန်းတမျိုးပါပဲ ညီလေးရေ..
စာရေးမကောင်းလို့လည်း ၀မ်းနည်း စရာ မရှိပါ ဘူး ညီလေးရေ...
အကိုတော့ နည်းပညာသမားတွေ ကို အားကျပါတယ်.. ကိုယ်တိုင်
ကလည်း ခပ်ထူထူမို့ ညီလေးတို့လိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး... ကိုယ်တတ်
ထားတဲ့ အရာလေးတွေ ကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ တော်ယုံလူ မလုပ်နိုင်
တဲ့ အလုပ်ပါ ညီလေးရေ... ဆက်လျှောက်ပါ.. အမြဲလာရောက်
အားပေးနေပါမယ်.. ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိရင်ချရေးလိုက်
ပါ.. ကာရံတွေ နဘေတွေမလိုပါဘူး... ဘယ်သူမှလာမဖတ်ရင်နေ
ပါစေ အကိုလာဖတ်ပြီး အားပေးနေမယ် ဆိုတာတော့ ယုံပါညီလေးရေ.။